I-loft yesimanje futhi ebanzi eMarbella - I-Airbnb
I-loft yesimanje futhi ebanzi eMarbella
San Pedro Alcántara, Andalucía, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Andrea
Loft ethokomele futhi ebanzi (50 m2) etholakala enkabeni yeSan Pedro Alcántara (Marbella), futhi eduze nezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela kanye nezinsizakalo eziningi (amakhemisi, amabhange, njll.). Ulwandle luyimizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo, izindawo ezithakazelisayo njengePuerto Banus noma isikhungo se-Marbella ziphakathi kwemizuzu emi-5 neyi-10 ngemoto. Yindawo ephezulu elungiswe ngokuphelele, futhi iyindawo ekahle yokujabulela izinsuku ezimbalwa zesimo sezulu esihle saseMarbella. Itholakala eduze kwesiteshi sebhasi (1 iminithi uhamba ngezinyawo).
I-loft ilungele i-ambience, indawo nokunethezeka. Isivuselelwe ngokuphelele, inesikhala esihlukaniseke phakathi kwegumbi lokuphumula nelokudlela elincane elinomabonakude, kanti ngakolunye uhlangothi kunendawo yokuphumula enombhede wabantu ababili, ikhabethe kanye nekhishi elincane eduze kwendlu yokugezela. Indlu yokugezela ineshawa, i-microwave, ifriji egcwele (enesiqandisi), i-ceramic hob encane, umenzi wekhofi, i-heater yamanzi, i-toaster namapuleti.
I-loft itholakala ezingeni lomgwaqo, ngaphandle kwezitebhisi, futhi ifinyeleleka ngokuqondile ngaphandle.
Uzoba ne-WIFI futhi. Yindawo efanelekile yabashadikazi, imindeni, amaqembu abangani, abahambi nabahamba ngebhizinisi.
4.61 · 94 okushiwo abanye
Itholakala phakathi nendawo, eduze nakho konke okudingayo, njengezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, impilo yasebusuku, amakhemisi, izinsiza zezokwelapha, izindawo zokuzivocavoca, amabhange, njll. Ubhishi kanye ne-paseo kuqhele ngamakhilomitha angu-1.5 ukusuka phezulu, futhi idolobha elidala laseSan Pedro likude ngo-1. ukuhamba umzuzu. Uhlu lwamathiphu, imisebenzi, imibono kanye namaphoyinti aseduze ongawathakaselayo akulindile endaweni ephezulu kulabo abeza namabhethri akhokhiselwe uhambo, uma kwenzeka ukudinga.
Uma izihambeli zidinga noma yiluphi uhlobo lolwazi ngaphambi noma phakathi nesikhathi sokuhlala kwazo, zizohlala zinokunaka komuntu siqu komninikhaya.
Ngihlala e-Marbella ngakho ngizotholakala noma nini lapho ngingakwazi uma isivakashi sikudinga, ngingakunikeza izincomo zomuntu siqu mayelana nemisebenzi nezindawo onentshisekelo kuzo endaweni, futhi ngingasiza ukuhlela ukuhlala kwakho.
Inombolo yepholisi: V001_005_20171214
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$315.
Hlola ezinye izinketho ezise- San Pedro Alcántara namaphethelo